September 1, 2021 - Celegroup
September 1, 2021 cele group 0
ငွေ မက်တယ်ဆိုပြီး အပြစ်ပြောတတ်တဲ့လူတွေကို တကယ်ရယ် (ရီ)ချင်တယ်….
ေငြမက္တယ္ဆိုၿပီး အျပစ္ေျပာတတ္တဲ့လူေတြကို တကယ္ရယ္ (ရီ)ခ်င္တယ္…. ျပည့္ျပည့့္္စုံစုံနဲ႔ ေမြးဖြားလာၾကလို႔ ကိုယ္ခ်င္းမစာတတ္တာ မ်ားလား ကိုယ္တိုင္းက အျဖစ္မရွိလို႔ အျပစ္ဖြဲ႕ခ်င္တာလားေတာ့ မသိဘူး ေငြမက္တယ္ လို႔အျပစ္ေျပာရေအာင္ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ျပန္ေမးၾကည့္ပါဦး “ေငြ မရွိရင္ ျဖစ္လို႔လား…ေငြမပါဘဲ ၿပီးတဲ့ေနရာရွိလို႔လား ” ပိုက္ဆံ မရွိလို႔ မ်က္ႏွာငယ္ရတဲ့ ဘဝေတြ ျမင္ဖူးလားတန္းတူ မဝတ္စားႏိုင္လို႔ လူေတြၾကား သိမ္ငယ္ရတဲ့ဘဝေတြ ျမင္ဖူးလား ပိုက္ဆံ ထုတ္မရွင္းႏိုင္မွာစိုးလို႔ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ ဆိုင္ မထိုင္ျဖစ္တဲ့ ဘဝေတြ […]
မန္တလေးက ကားဆရာပေးတဲ့ သင်ခန်းစာ လေးတစ်ခု မန္တလေးမှ ကားလာဝယ်သော ဝယ်သူနှင့်ဈေးတည့်ပြီး ဝယ်သူမှငွေချေ၍ မောင်းသွားမည် ဟုပြောသောအခါ အကိုဆရာသည် မရသေးဘူး ခဏနေအုံး ဟုဆိုရ်ျ တပည့်တယောက်အား ဟေ့ ကားဘီး လေးလုံးစလုံး စစ်၊ ဘတ္ထရီစစ် ပီးရင် ဆီအပြည့် ဖြည့်ပေးလိုက်ဟု ပြောပီး အားလုံး လုပ်ကိုင် စစ်ဆေး ပီးစေကာမှ ရပီ နောင်ကြီးဟု ဆိုကာ ကားသော့ အပ်လိုက်သည်။ ဝယ်သူမှာ ပြောဖွယ်ရာမရှိ […]
Wave Money ထုတ်လို့ရတယ်ဆိုပြီး လိမ်နေတဲ့သူတွေရှိ်လို့ သတိထားပါ…ကိုယ်တွေ့ဖြစ်ရပ်
Wave Money ထုတ်လို့ရတယ်ဆိုပြီး လိမ်နေတဲ့သူတွေရှိ်လို့ သတိထားပါ(ကိုယ်တွေ့ဖြစ်ရပ်) Wave Money ထုတ်လို့ရ တယ်ဆိုပြီး post တွေတင်ေ ပးနေတဲ့သူတွေကို သတိ ထားပါ သူတို့ကို ထုတ်လို့ရလား သွားမေးရင် ဘယ်လောက်ထု တ်ချင်တာလ ည်းဆိုပြီး မေးပါလိမ့်မယ် ကိုယ်က ၅ သိန်း ၁၀ သိန်း ပြောလိုက်တာနဲ့ Wave Money Level ဘယ်လောက်လည်းဆိုပြီး မေးပါလိမ့်မယ်Wave Money က level […]
တစ်သက်လုံးပေါင်းသင်း ဆက်ဆံဖို့အတွက် အသင့်တော်ဆုံးဘော်ဒါ (၅)မျိုး….
ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမှာ အသင့်တော်ဆုံးဘော်ဒါ (၅)မျိုး…. ၁။ ကိုယ်အခက်အခဲကြုံတိုင်း မကူညီနိုင်ရင်တောင် နှစ်သိမ့်ပေးနိုင်တဲ့ ဘော်ဒါ ကိုယ်အခက်အခဲကြုံတိုင်းမှာ ကိုယ့်ကို ဘာမှ မကူညီနိုင်ပေးနိုင်ရင်တောင်မှ စိတ်မကောင်းတွေဖြစ်ပြီးအတက်နိုင်ဆုံး နှစ်သိမ့်ပေးတဲ့ ဘော်ဒါမျိုးကတော့ ရှားပါတယ်များသောအားဖြင့် ဘော်ဒါတွေကို တစ်ခုခု အကူအညီတောင်းတိုင်း မကူညီနိုင်ကြောင်း၊အဆင်မပြေသေးလို့ ဘာညာပြောပြီး လျှော်ချသွားတဲ့ ဘော်ဒါတွေ အများကြီးပါဒီလိုမျိုး မကူညီပေးနိုင်ရင်တောင်မှ သင့်ကိုဂရုတစိုက်နဲ့နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးပေးနိုင်တဲ့ ဘော်ဒါမျိုးကတော့ ရှားပါတယ်။ ၂။ ကိုယ်နဲ့အမြဲ သောက်ဖော်သောက်ဖက် ဘော်ဒါ ဒီလိုမျိုးဘော်ဒါကျပြန်တော့ သောက်ကြစားကြမယ်ဆို ၂ […]
ဤဆေးနည်းသည် အရိုးတစ်ခါ နှစ်ခါ ကျိုးထားသည့် သူများပင် လက်တွေ့ပျောက်ကင်း၍ အလုပ်ကြမ်းများပင် လုပ်ဆောင်နိုင်နေကြပြီဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့် ယုံယုံကြည်ကြည်ဖြင့်အညွှန်းအတိုင်းပြုလုပ်ပါလေ။ ဆေးနည်း-မိသ၁လင်ဥအစိမ်း၊ နနွင်းစိမ်း၊ ပျဉ်းတော်သိမ်ရွက်၊ မာလာဥစိမ်း၊ သက်ရင်းကြီးရွက်၊ နဘူးဆီးမခမ်း၊ ထမင်းဖြူ (ဝက်ဆီနှင့်မလွှရွက်,ထည့်လည်းရ မထည့်လည်းရသည်) ပြုလုပ်ပုံ – ပါဝင်ပစ္စည်းများကို အနည်းငယ်စီ ညက်အောင်ထောင်း၍ အဝတ်သန့်သန့်ဖြင့်ထည့်ပီးအနည်းငယ် နွေးနေအောင် မီးပြ၍ (မီးမပြလိုရင် ရေနွေးအိတ်ကပ်၍) နွေးလာလျှင် ဖြစ်ပွားသည့်နေရာပေါ်သို့အုံပြီး ကျပ်စည်းပေးရပါသည်။ အချိန်-၁ရက်၂ရက် အုံထားသည့် ဆေးများခြောက်ရင် […]
အမိျမန္မာႏိုင္ငံႀကီးအတြက္အတိတ္နိမိတ္ေကာင္းတခုပါ မဟာျမတ္မုနိဘုရား ၿပဳံးေတာ္မူေနပါၿပီ ရွယ္ေပးျခင္းျဖင့္ ကုသိုလ္ရယူလိုက္ၾကပါေနာ္…
အမိမြန်မာနိုင်ငံကြီးအတွက်အတိတ်နိမိတ်ကောင်းတခုပါ မဟာမြတ်မုနိဘုရား ပြုံးတော်မူနေပါပြီ ရှယ်ပေးခြင်းဖြင့် ကုသိုလ်ရယူလိုက်ကြပါနော် မြန်မာနိုင်ငံကြီးအတွက်အတိတ်နိမိတ်ကောင်းတခုပါ မဟာမြတ်မုနိဘုရား ပြုံးတော်မူနေပါပြီ ရှယ်ပေးခြင်းဖြင့် ကုသိုလ်ရယူလိုက်ကြပါနော် (နမောတဿ)လို့ ရေးပြီးရှယ်ပါ ကံကောင်းပြီး ထူးခြားလာပါမည်။ မဟာမြတ်မုနိဘုရားပြုံးတော်မူနေပါပြီ မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီး တိုးတက် ကြီးပွားတော့မယ့်အတိတ်နိမိတ်ပါ၊ ကွန်မန့်မှာ (နမောတဿ)လို့ ရေးပြီးရှယ်ထားပါ။ လက်တွေ့ကံကောင်းပြီး ထူးခြားလာပါမည်။ မယုံမရှိကြနဲ့နော်။ လက်တွေ့စမ်းကြည့်လိုက်ပါ။ ကံကောင်းခြင်းအတိတ်နမိတ်တွေ ပြလာပါလိမ့်မယ်။ သိပ်မကြာခင်မှာဘဲ ရွှေငွေတွေ တိုးပွားပြီး ကြီးပွားချမ်းသာလာပါလိမ့်မည်။ ယုံကြည်မှုဖြင့် ရှယ်လိုက်ပါ။ ရှယ်ခြင်းဖြင့် ကံကောင်းခြင်းတွေရယူလိုက်ပါ။ […]
လူပျိုကြီး အပျိုကြီးသေဆုံးလျှင် ငှက်ပျောတုန်းထည့်ရခြင်းရဲ့ အကြောင်းရင်းမှန် သာမာန်အမြင်အယူအစအနေနဲ့ ငှက်ပျောတုံးကပဲ သေသူအတွက် အဖော်ဖြစ်စေသလိုလို ၊ ဒီဘဝ အိမ်ထောင် မကျပဲသေသွားရလို့နောက်နောင်ဘဝတွေ အတွက် အိမ်ထောင်ကျအောင်ဓာတ်ရိုက် ဓာတ်ဆင်သဘောနဲ့ ယတြာချေတာလိုလို ဒီလိုပဲ ထင်မြင်နေကြတာပါ ။ ဒီကိစ္စနဲ့ ပက်သက်ပြီး ဒီနေ့လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာ မြင်တွေ့နေတဲ့ သေဆုံးသူနဲ့ အဖြစ်နဲ့ တင်ထားကြတာ တွေ့ရပြီး တချို့ကလည်း လက်ခံစရာမရှိကြောင်း ရေးတင်ထားကြတာ တွေ့ရတယ် ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ယခုပုံပါ အခင်းဖြစ်ရာဒေသရဲ့ အယူအစွဲက […]
အနံ့ပျောက်တာ ဖျားတာတို့အတွက် ဆရာဝန်ကြီးကိုယ်တိုင်ပေးထားတဲ့ နည်းလမ်းလေးပါ အနံ့ပျောက်တာ ဖျားတာ ကိုယ်လက်ကိုက်ခဲခြင်းတို့အတွက်ဆရာဝန်ကြီးကိုယ်တိုင်ပေးထားတဲ့ နည်းလမ်းလေးပါ သူ့ဆေးခန်းမှာလဲ လာသမျှ လူနာတိုင်းကို ပေါင်းအိုး အကြီးကြီးထဲ ထည့်ပြီး အယောက်ခြင်းစီတိုင်းကို ရှူနိုင်အောင် မြန်မာဆေးနည်းနဲ့လဲ စီစဉ်ပေးထားပါတယ်။ အိမ်မှာတော့ ဒီလိုအိုးနဲ့ တည်ထားပြီး သတိရတိုင်း ထရှူလိုက်တာပဲ အပန်းလဲမကြီးသလို့ ရှူချင်တဲ့သူတွေတွက် နည်းလမ်းလေး မျှဝေပေးတာပါ ဘေးဥပါဒ်လဲ လုံးဝ မရှိပါဘူး။ အနံ့ပျောက်တာ ဖျားတာ ကိုယ်လက်ကိုက်ခဲတာ တကယ်သက်သာပါတယ် ပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေက […]
ဖုန်းသုံးတဲ့အခါ လူတိုင်း လုပ်မိတက်တဲ့ မကောင်းတဲ့ အမှား (၅)ခု
ဖုန္းသုံးတဲ့အခါ လူတိုင္း လုပ္မိတက္တဲ့ မေကာင္းတဲ့ အမွား (၅)ခု ဖုန္းေတြဟာ လူေတြနဲ႔ အၿမဲတမ္းအတူရွိတဲ့ အေဖာ္တစ္ေယာက္လို ျဖစ္ေနပါၿပီ။ လူအခ်င္းခ်င္းေတာင္မွ လူေကာင္းလူဆိုး ခြဲျခားေပါင္းရေသးတာပဲ။ ဖုန္းေတြဟာ လူေတြနဲ႔ အၿမဲတမ္းအတူရွိတဲ့ အေဖာ္တစ္ေယာက္လို ျဖစ္ေနပါၿပီ။ လူအခ်င္းခ်င္းေတာင္မွ လူေကာင္းလူဆိုး ခြဲျခားေပါင္းရေသးတာပဲ။ ဒီေတာ့ ၂၄ နာရီနီးပါး အနားအၿမဲရွိေနတဲ့ ဖုန္းရဲ႕ ေကာင္းတဲ့ဆိုးတဲ့အခ်က္ေလးေတြကို မွတ္သားထားၿပီး ကိုယ့္အတြက္မေကာင္းတဲ့ အခ်က္ေတြကို မလုပ္မိေစဖို႔ သတိထားဆင္ျခင္ၾကရေအာင္ေနာ္ (၁) ဖုန္းနဲ႔အတူအိပ္ျခင္း […]
ရဟန္း လက္မခံေသာ အလႉ
ရဟန္း လက္မခံေသာ အလႉ တစ္ေန႔မနက္ ရဟန္းတစ္ပါးဟာ လမ္းေလၽွာက္ၿပီး ရြာထဲက အိမ္ေတြမွာ ဆြမ္းခံႂကြလာတယ္။ ေစာေစာစီးစီး အရက္ေသာက္ၿပီး အေတာ္ေလးမူး ေနတဲ့ အရက္သမား တစ္ေယာက္ဟာ အဲဒီရဟန္းကို ျမင္တာနဲ႔ ေဘးနားက အတူလိုက္ပါသြားရင္ ရဟန္းကို ေအာ္ဟစ္ဆဲဆိုပါေတာ့တယ္။ အမူးသမားဟာ ရြာမွာ အဆိုးဆုံး လူမိုက္တစ္ေယာက္မို႔ ရြာသူရြာသားေတြဟာ ေၾကာက္ၿပီး ဘာမွ မေျပာရဲၾကဘူး။ ရဟန္းဟာ လူမိုက္ဆဲဆိုသမၽွကို ဘာ တစ္ခြန္းမွ ျပန္မေျပာ တစ္ခ်က္လွည့္မၾကည့္ဘဲ […]